Filimka gaagaaban ee gaagaaban Blush wuxuu soo baxayaa Oktoobar 1 oo waxaan horey u haysannay goosgooskii ugu horreeyay | Waxaan ka imid mac
Filimka gaagaaban ee filimka Blush wuxuu furmayaa Oktoobar 1 waxaana horey u haysanay goos gooska kowaad
Mar waa inaan ka hadalnaa sii deynta soo socota ee imaan doonta toddobaadyada soo socda aaladda fiidiyowga ee Apple. Munaasabaddan, waxaan sii wadnaa inaan xoogga saarno ku qanacsan yihiin kuwa yaryar oo leh filim gaagaaban oo firfircoon oo la yiraahdo Blush.
Horudhaca Blush wuxuu na tusayaa kulan ay cirbixiyeenku kula kulmeen shisheeye casaan ah meera yar oo cidla ah. Blush waa Filimkii ugu horreeyay ee gaagaaban oo ay soo saartay Apple TV + iyadoo lala kaashanayo Skydance Animation.
Filimka gaagaaban waxaa qoray oo hagaya filim sameeye Joe Mateo, Guuleystaha Emmy ee gaaban animation Roondo soo degitaan 2009. Wuxuu kaloo helay 3 magacaabid oo loogu talagalay Abaalmarinta Annie, abaalmarino ka yimid warshadaha animation.
Sida laga soo xigtay Apple, sheekadu waxay wadaagaysaa "safarka qoto dheer ee Matthew ee bogsashada, rajada, iyo daqiiqadaha aan la dafiri karin ee bini'aadanka ee jacaylka lagu badbaadiyay."
Blush wuxuu raacayaa safarka qubeyste-cirbixiyeen ka lumay ka dib markii uu shilkiisa ku degay meeraha cidla ah ee cidla ah. Markuu booqdaha guud yimaado, socotada kaliya ee keli ah waxay ogaataa farxada dhismaha nolol cusub waxayna ogaataa in koonku u dhiibtay badbaado la yaab leh.
Dheecaan ku biiro animation kale oo asal ah ayaa loo qorsheeyay in lagu bilaabo Apple TV +, oo ay ku jiraan laba filim oo uu soo saaray John Lasseter: nasiib y Spellbound. Waxay sidoo kale ku biireysaa asalka asalka Apple animation, sida magacaabista Oscar. Wolfwalkers. Cinwaankan cusub wuxuu ka soo muuqan doonaa Oktoobar 1 gaar ahaan Apple TV +.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Filimka gaagaaban ee filimka Blush wuxuu furmayaa Oktoobar 1 waxaana horey u haysanay goos gooska kowaad
Cusboonaysiinta amniga cusub ee macOS Catalina 10.15.7 ayaa hadda la heli karaa
1Password wuxuu soo bandhigayaa adeeg lagu qariyo boostada asalka ah ee la mid ah ta Apple